हिलारी क्लिन्टन, डोनाल्ड ट्रम्प र चीन « Khasokhas Follow @khasokhasmag
हिलारी क्लिन्टन, डोनाल्ड ट्रम्प र चीन
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एउटा कुरा निश्चित छ, दुवै उम्मेदवार चीनलाई गाली गर्दै अमेरिकी मत जित्न कोसिस गर्नेछन् । रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनबीच अनेक विषयमा मतान्तर होला तर उनीहरू एउटा विषयमा भने एकै ठाउँ छन्, कि चिनीले लाखौँ अमेरिकी रोजगारी खोसेको छ र त्यो अमेरिकीलाई नै फिर्ता गरिनुपर्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार चीन र व्यापारमाथि कडा टिप्पणी गर्न रुचाउँछन् । क्लिन्टन त ओबामा प्रशासनको सन् २०११ को एसियातिरको धुरीसँग निकटबाट जोडिएकी छिन् । यो यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने रणनीति हो । ट्रम्प त निर्माण रोजगारी एसियाबाट अमेरिका फर्काउने विषयमा लगातार बोलिरहेका छन् ।
तर, उनीहरू निर्वाचित भए भने कसरी व्यवहार गर्दा हुन् । कडा रूपमा बोल्नु एउटा हो, सोहीअनुरूप कार्य गर्नु पूर्णतः फरक । निर्वाचित भएका अवस्थामा के उनीहरू साँच्चै अमेरिकी नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछन् ? र, प्रशान्तपारि सि जिनपिङले कोसँग ‘डिल’ गर्नेछन्, क्लिन्टन कि ट्रम्प ?
ट्रम्पको निर्वाचन अभियानको नारा छ, ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने’ र उनी एउटा विषयमा काबिल छन् भने त्यो हो विषयलाई महान् बनाउने । ट्रम्पको यो गुणलाई अनुभूत गर्ने हो भने उनका धेरै अफिस बिल्डिङ, गल्फ कोर्स तथा क्लबहरूको भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी जोडदार विश्वास गर्छन्, चीनसँगको व्यापार एउटा विषय हो, जसले अमेरिकालाई हुनुपर्ने जति महान् बनाएको छैन ।
उनको अभियान वेबसाइटले पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टलाई अमेरिकी निर्माण उद्योग ध्वस्त बनाएकोमा दोष दिन्छ किनकि क्लिन्टनले विश्व व्यापार संगठनमा चीनको सदस्यता स्वीकार गरेको थियो । उक्त साइटले चीनबाट आर्थिक पहलकदमी फिर्ता ल्याउने विस्तृत योजना नै राखेको छ ।
पहिलो, ट्रम्पले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १९८८ को एउटा ऐनअनुसार चीनमाथि मुद्रा नियन्त्रक घोषणा गर्नेछन् । चीनको मुद्रा अमेरिकी डलरविरुद्ध अधिमूल्यन भइरहेको वास्तविकता सायद उहाँको हिसाब–किताबमा छिरेन । चीनले आफ्ना सामानको निर्यात तीव्र पार्न एकपटक मुद्राको अवमूल्यन गरेको थियो । त्यो अहिले कायम छैन । चीनका निर्यात सदस्य विगत पाँच वर्षदेखि गतिहीन अवस्थामा छन् । दोस्रो, ट्रम्पले चीनलाई अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति चोर्नबाट रोक्नेछन् । उनले प्रविधि हस्तान्तरण रोक्नेछन् । अहिले चीनमा लगानी गर्ने अमेरिकी कम्पनीले तिनको स्वामित्व प्रविधि साझेदारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यसो गर्दा अमेरिकी कम्पनीलाई चीनमा लगानी गर्न रोक्नुजस्तै हुनेछ । कुनै अमेरिकी नेताले यस्तो कदम उठाउला ?
हिलारी क्लिन्टन पनि चीनमाथि कडा रुझान राख्न सबै अवसर लिन खोज्छिन्, तर उनका वक्तव्य ट्रम्पका भन्दा निकै नै मिलापकारी छन् । उदाहरणका लागि, उनले ‘मुद्रा नियन्त्रण’ को मुद्दामा कुनै अडान लिएकी छैनन् । बरु, उनले अमेरिकी कानुनअन्तर्गत चीन बजार अर्थतन्त्रको मान्यता नदिने बताएकी छिन् ।
क्लिन्टनले अस्पष्ट रूपमा उसले कम मूल्यमा स्टिल निर्यात गरिरहेको विषयलाई लिएर चीनसँग अडान लिने राय दिएकी छिन् । तर, के गर्नेछिन् भनेर व्याख्या गरेकी छैनन् । स्टिल नाकाबन्दी सम्भव देखिन्न । उनी चीनलाई प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक नीतिबारे जिम्मेवार बनाउने भनेर बोल्छिन् तर कुनै विशिष्ट वाचा वा धम्की दिने सवालमा सावधान छिन् । संक्षेपमा भन्दा क्लिन्टन चीनमाथि कडा हुन निकै होहल्ला त गर्छिन् तर उनको चेतावनी कुनै ठोस नीतिगत कार्यान्वयनमा जानेमा कमै सम्भावना छ ।
चीनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसले जित्छ भन्नेमा धेरै फरक पर्ने देखिन्न । किलन्टन र ट्रम्प दुवैले निर्माण उद्योगसम्बन्धी रोजगारी अमेरिका फर्काउने वाचा त गरेका छन् तर त्यसका लागि कुनै ठोस र कार्यान्वयनयोग्य नीति भने ल्याएका छैनन् । तथापि, चिनियाँ राष्ट्रपतिले भोट हाल्न पाउँथे भने उनले सम्भवतः क्लिन्टनलाई रोज्ने थिए ।
(बाबोन्स विश्व अर्थतन्त्रको संरचनाका विज्ञ हुन्)
अल जजिराबाट-नयाँ पत्रिका